Waxa dalkayga ka jiray dhalooyin quraarado ah ilaa wakhtiyadii hore. Waagii hore, wareegyada tacliinta waxay rumeysnaayeen in quraaraduhu ay aad u yaryihiin waqtiyadii hore, sidaas darteed waa inay lahaadaan oo ay isticmaalaan dhowr fasallo xukun. Si kastaba ha noqotee, daraasadihii ugu dambeeyay waxay rumaysan yihiin in dhalooyinka qadiimiga ah aysan ku adkaanayn soo saarista ...
Ma ogtahay? Waxaa jira noocyo badan oo dhalooyin quraarado ah
Astaamaha iyo noocyada dhalooyinka dhalada: dhalooyinka dhalada ah ayaa ah weelasha ugu weyn ee lagu keydiyo cuntada, warshadaha dawooyinka iyo kiimikada. Waxay leeyihiin xasillooni kiimikaad oo wanaagsan; fududahay in la shaabadeeyo, ciriiri hawo wanaagsan, iyo hufnaan, iyo waxa ku jira waxaa laga daawan karaa banaanka; keyd wanaagsan ...
Habka wax soo saar ee dhalooyinka quraaradaha badanaa waxaa ka mid ah: Burburi alaabta ceyriinka ah ee badan (quartz sand, ash ash, limestone, feldspar, iwm) si aad u qalajiso alaabta ceyriinka ah ee qoyan, kana saar waxyaabaha ceeriin ee birta ku jirto si loo hubiyo tayada muraayadda. Diyaarinta ...